बिजुली चोर्ने ३ वडाध्यक्ष पक्राउ, ५६ हजार जरिवाना तिरे - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
असार ०१, २०७५ 5250 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
देशका विभिन्न ठाउँमा बिजुली चोरीमा संलग्न ३ स्थानीय प्रतिनिधि (वडाध्यक्ष) पक्राउ परेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा नेपाल प्रहरीको संयुक्त गस्ती टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।
काभ्रे मण्डनदेउपुर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष नारायण लम्साल, सप्तरी तिरहुत गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष रामानन्द चौधरी तथा बर्दिया मधुवन नगरपालिका–२ का पहाडी थारु पक्राउ परेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
लम्साल र चौधरी क्रमशः ४१ हजार २ सय ८७ रुपैयाँ तथा १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर छुटेका छन् । थारु यसअघि नै जरिवाना तिरेर छुटेका थिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बिजुली चोर्ने जोसुकैलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
मन्त्री पुन, गृह मन्त्री रामबहादुर थापा तथा प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनालले बुधबार संयुक्त बैठक राखी विद्युत चोरी नियन्त्रण परिणाममुखी बनाउने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयकै आधारमा प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्राधिकरण शाखा कार्यालयले समन्वय गरी संयुक्तरूपमा चुहावट नियन्त्रण सुरु गरेका छन् ।
प्राधिकरण काभ्रे वितरण केन्द्रले वडाध्यक्ष लम्सालले कुन्ताबेँसीमा हुकिङ गरी कुखुरा फार्म चलाएको फेला पारेको थियो । उनलाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेल ल्याइएको थियो ।
उता राजविराज वितरण केन्द्रले तिरहुत गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष चौधरीले हुकिङ गरी घरमा विद्युत प्रयोग गरेको भेट्टाएको थियो । टोलीले वडाध्यक्षसहित हुकिङ गर्ने २१ जना समेत पक्राउ गरेको थियो ।
विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन–२०५८ र नियमावली २०५९ मा विद्युत चोरी गरेर प्रयोग गरिएका उपकरणले खपत गर्ने लोडका आधारमा हिसाब गरी एक वर्षको जरिवाना तिराउने व्यवस्था छ । वडाध्यक्षहरूलाई यही अनुसार जरिवाना तिराइएको छ । हेरक क्षेत्रीय कार्यालयले बढी विद्युत चुहावट हुने जिल्लामा नियन्त्रणको अभियानै चलाएका प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले बताए ।
‘विद्युत चोरी नगर्न तथा मिटर जडान गर्न आग्रह गर्दै माइकिङ गर्ने, प्रशासनको सहयोगमा हुकिङ हुने क्षेत्रमा अपरेसन सञ्चालन गर्ने लगायत काम अभियानकै रूपमा सञ्चालन हुँदैछ,’ उनले भने, ‘ठूला ग्राहक (थ्रि फेज) को मिटर पनि चेक गरिनेछ ।’
प्राधिकरणले चैतसम्म चुहावट २०.०६ प्रतिशतमा झारेको छ । यो लक्ष्य चालू आर्थिक वर्षभित्र हासिल गर्ने योजना थियो । तर, आव नसकिँदै लक्ष्य पूरा भएको प्राधिकरणको दाबी छ ।
आव २०७३/७४ मा चुहावट २२.९ प्रतिशत थियो । तीन वर्षभित्र प्रणालीको चुहावट १५ प्रतिशतमा झार्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । प्राधिकरणले बक्यौता महसुल असुली, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर तथा वितरण लाइन सदृढीकरणमा समेत जोड दिएको छ ।